Antsirabe : zazakely maty nihinana poizina | NewsMada
Antsirabe : zazakely maty nihinana poizina
Zazakely telo taona sy tapany tao amin’ny fianakaviana iray maty vokatry ny fihinanana poizina tsy nahy tao Ambohidava, distrikan’Antsirabe I ny alakamisy lasa teo. Olona roa hafa koa mbola tsaboina eny amin’ny Hopitaly Atsimo Antsirabe amin’izao fotoana izao vokatr’io fanapoizinana ara-tsakafo tsy nahy io.
Fantatra fa mpitsimpona tavoahangy plastika sy fatim-by eny amin’ireny fanariam-pako ireny no antom-piveloman’ity fianakaviana ity, ka ny alakamisy maraina io no nahitan’ilay renim-pianakaviana fototr’izao fahavoazana izao, vovo-javatra fotsifotsy teny amin’ny fanariam-pako fandehanana tao Ambohidava izay fonenany ihany. Noheveriny ho vovo-tsira ilay izy ka nentiny nody. Norarahin-janany vavimatoa tamin’ilay noheverina fa vovo-tsira ny vary nahandroina, kanjo raha vantany vao nihinana izy sy ny zandriny vao telo taona sy tapany ary ny raim-pianakaviana, nahatsiaro tena ho hafahafa tanteraka sy toa tsy nahazo aina. Ny vary nohanina anefa tsy nisy tsiron-tsira akory.
Nomena ny kisoa avy hatrany ilay vary masaka rehetra teo, ary maty minitra vitsy taorin’izany ilay biby raha vantany vao nihinana azy.
Ilay zazakely telo taona sy tapanay kosa, nandoa sy nivalana be noho ny aretin-kibo nahazo azy. Toy izany koa ny nahazo ilay zanaka vavimatoa sy ilay raim-pianakaviana ary samy nentina haingana teny amin’ny Hopitaly Atsimo Antsirabe.
Tapitra ny ain’ilay zazakely raha vao tonga teny an-toerana raha mbola tsaboina sy arahi-maso akaiky kosa ilay raim-pianakaviana sy ny zanany vavimatoa 14 taona. Tsy mbola fantatra mazava kosa ny momba ilay poizina hatreto.
Jeannot R. sy J.C